4 Underrated Places Na Europe pụrụ ime eme Site Train | Save A Train
Home > Train Travel Holland > 4 Underrated Places Na Europe pụrụ ime eme Site Train
N'ihi na ihe niile na-nkọ njem si n'ebe ndị na-achọ ebe na Europe pụrụ ime eme ụgbọ okporo ígwè n'ihi na ị ga-kama nabatara ọṅụ nke a tren njem obi ụtọ karịa ihe ụgbọelu, ebe a bụ a mpempe oké ozi ọma ị ga-n'anya. European ụgbọ okporo ígwè njem agba kwa ụbọchị n'ime obi nke nnukwu obodo, ikwe gị enwe Europe ebube enweghị na-agbasa n'ụlọ akụ mgbe anụ ụtọ ahụmahụ pụrụ iche nke a ụgbọ okporo ígwè.
Lee ụfọdụ oké ebe na Europe pụrụ ime eme ụgbọ okporo ígwè:
Nke a ụgbọ okporo ígwè ga-adịgide adịgide maka banyere 5 awa na-eri gị ihe dị £ 168 maka a nloghachi tiketi. Ọ bụrụ na ị na-enwe obi abụọ banyere ịga na France, ebe a bụ ihe mere i kwesịrị idebe na àgwà ọjọọ. Ina ụgbọ oloko gị tiketi ota na isi kwupụta nke a ọmarịcha obodo. Akpa oyi, French ndị inyom na-ọmarịcha. Nke abụọ, nri bụ magburu onwe, na mmanya bụ ihe niile ha na-ekwu na ọ bụ - oké ọnụ ma uru ọ. The mba na-aga nke ọma lụọ nwunye Gallic na German mmetụta bụ nnọọ otu n'ime ndị kasị akpali akpali ahụmahụ ị ga-esi na-ahụ na a ndụ. Nile si Places na Europe pụrụ ime eme Site Train, Strasbourg ga-unu swoon, na ị ga-ewere selfies n'ihu super ịrịba ama Strasbourg Katidral.
Jidere a akwụkwọ ị ga-chọrọ ịgụ ihe 5.30 awa n'ihi na nke ahụ bụ ogologo oge ọ ga-ewe gị iji Cologne. Iji zaa ajụjụ gị ozugbo: ee, ị ga-agbanwe ụgbọ oloko na Brussels. Nloghachi tiketi na-efu £ 177, ma ọ bụ ọnụ ahịa ya. Gịnị? N'ihi na nke a bụ, enweghị a doro anya, ndị kasị mma obodo na Germany; regally ọdụ na bịara n'ikperé mmiri nke Rhine, Cologne anya ebube nile afọ. Ị a foodie? Ị ga-ahụ n'anya nke eateries tinyere waterside ikpuru nke Am Frankenturm! Ọzọkwa, lelee Museum Ludwig maka a ilekiri na ikenyeneke mbiet oge a art.
Rotterdam bụ onye nke kasị mma ebe na Europe pụrụ ime eme ụgbọ okporo ígwè. Ị ga-agba ịnyịnya nke mkpokọta awa anọ, na ga nwere a mgbanwe nke ụgbọ oloko na Brussels. Ị kwesịrị ị na-etinye ihe karịrị £ 185 na gị na nloghachi tiketi. Rotterdam ka ogologo ẹkenịmde a ụdị ọjọọ aha ruru ya gritty mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri na ihe ọ bụla ma cranes na mbupu containers. na nso nso, ọ na-ama jijiji anya na aha na-na-eme njem nleta na-ahụ ya na ihe kpamkpam ọhụrụ ìhè. Nke a oge gburugburu, ị ga-n'anya obodo ya nkà akụ trove, na Museum Boijmans Van Beuningen nke "nke na-agba ndị gamut si Brueghel nke Okenye na Salvador Dali." E nwere ọtụtụ ihe na-ahụ ebe a, na eziokwu na Rotterdam bụ pụrụ ime eme site okporo ígwè dị nnọọ ọzọ plus.
Na mgbakwunye, na ụzọ e ị ga-ahụ ama tulip ubi, a ga-maa-unu n'obodo a oké vibe.
Ikpeazụ anyị ghota na “Ebe na Europe pụrụ ime eme Site Train” bụ – Antwerp (Belgium)
Ihe kacha mfe iji Antwerp bụ site-ejegharị ejegharị dị ka awa anọ ụgbọ okporo ígwè na-agbanwe agbanwe ụgbọ oloko na Brussels. Ị ga-adịghị akwụ ụgwọ n'elu £ 87 maka a nloghachi tiketi nke bụ ịrịba. N'agbanyeghị ya weird ọnọdụ (obodo bụ na ókè-ala n'etiti Belgium na Netherlands), Antwerp bụ, strangely ezu, super iji ụgbọ okporo ígwè. Ị pụrụ ọbụna ịzụta ihe "ọ bụla Onye Belgium Station" tiketi site Eurostar na esi n'ebe ọ bụla na mba, Antwerp gụnyere - n'otu price dị ka a na-agba ịnyịnya na Brussels. Antwerp ga-akpali nnọọ mmasị maka niile diamond hụrụ: Antwerp, Belgium prides na ya Diamond District nke obụrede mbụre nke ịbụ obodo ebe ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị ahụkebe ọnwụ, polishing, na ahia nke diamonds / bara nnukwu uru na-ewere ọnọdụ.
Breda ka Antwerp Ụgbọ oloko
Kpọtụrụ Save A Train ka akwụkwọ gị ụgbọ okporo ígwè eme njem ebe na Europe pụrụ ime eme ụgbọ okporo ígwè na anyị ga-anapụ gị ihe ọ bụla dị oké ọnụ ntinye akwụkwọ ụgwọ, mgbagwoju anya ntinye akwụkwọ usoro, na-agaghị ekwe omume udu. Anyị na-na nwetara gị kpuchie ọ bụla nzọụkwụ nke ụzọ. na, ozugbo na ihe niile si ota – na-eme ka n'aka na ị na-enwe ụgbọ oloko gị agafe na ebe, iri a ọtụtụ foto na ka anyị mara otú ihe wee!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F4-underrated-places-in-europe-reachable-by-train%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
#Rotterdam Antwerp Strasbourg ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ Travelcologne